गर्भनिरोधक साधन र बाँझोपन कसरी सम्बन्धित छन् ?
गर्भनिरोधक साधन मानवको प्रजनन् क्षमतालाई नियन्त्रणमा राख्ने एक भरपर्दो साधन हो । यसको जानकारी पाठ्यपुस्तकमै समावेश गरिएको कारण युवाहरुमा यसबारे जानकारी छ । तर विभिन्न तथ्यांक र खोजलाई हेर्ने हो भने धेरै मानिसहरुले यसलाई गर्भ रोक्ने साधनको रुपमा मात्र बुझेका हुन्छन् । यसले कसरी काम गर्छ र शरीरमा केहि हानी पुर्याउंछ कि पुर्याउंदैन भनेर बुझेकै हुँदैन त्यसैले यसको प्रयोग अव्यवस्थित रुपमा गरिरहेका हुन्छन् जसले गर्दा दीर्घकालीन समस्या वा बाँझोपनबाट ग्रसित हुन पुग्छन् ।
गर्भनिरोधक साधनका प्रकार
गर्भनिरोधक साधनको कामको हिसाबले यसलाई मुख्य ३ प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ ।
स्थायी गर्भनिरोधक साधन
यस अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टोमी, मिनी ल्याप, ल्याप्रोस्कोपी) गरिन्छ । यसमा पछि गर्भबस्ने सम्भावना हुँदैन ।
अस्थायी गर्भनिरोधक साधन
यस अन्तर्गत [कण्डम, मिश्रित चक्की (पिल्स), डिपोप्रोभेरा-तीनमहिने (सुई), नरप्लान्ट, पाठेघरमा राख्ने साधन (कपर-टी), आई, यू. डी., इम्प्लाण्ट्स्, आदि] पर्छन् । अस्थायी गर्भनिरोधक साधनले डिम्ब निष्कासनमा कमि ल्याएर वा महिलाको योनिरसलाई वीर्यका लागि प्रतिकुल पारेर वा भ्रूणलाई पाठेघरमा टाँसिन नदिएर गर्भ रोक्ने काम गर्छ । प्राकृतिक हर्मोनलाई औषधि वा सुईको माध्यमबाट प्रतिकुल बनाइराखिने भएकाले नै गर्भबस्न नसक्ने हो । यसको असर अस्थायी साधनको प्रयोग गरिरहंदा सम्म मात्र हुने भएका कारणले पनि डाक्टरहरु यसको नियमित प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् ।
त्यसैले अस्थायी गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग छोड्ने बित्तिकै गर्भधारण हुन सक्छ र बाँझोपन सँग यसको कुनै सम्बन्ध नहुने विभिन्न जानकारहरु बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा महिलाहरुले अस्थायी गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग छोडेको केहि महिनाभित्रै गर्भ बसेन भने चिन्तित हुने र बाँझो पो भइयो कि भन्ने चिन्ता लिन्छन् तर यो युक्तिसंगत होइन । अस्थायी गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्न छोडेको १ बर्षभित्र नै सम्पूर्ण कुरा सामन्य भइसकेको हुन्छ ।
सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने बढ्दो उमेर र तनावले पनि गर्भ बस्न गार्हो हुने गर्छ । त्यसैले सन्तान प्राप्तिको इच्छा भए २२-३५ वर्ष भित्रै सन्तान प्राप्त गर्नु उचित हुन्छ । केहि कारणवश ३५ वर्ष पश्चात सन्तान प्राप्त गर्ने इच्छा भएमा डिम्ब (महिलाको अण्डा) वा भ्रूण लाई फ्रिजिंग गरेर राख्न सकिन्छ र पछि सजिलै गर्भधारण गर्न सकिन्छ ।
कतिपय मानिसहरु अस्थायी गर्भनिरोधक साधनले पाठेघरलाई कम्जोर बनाउँछ भन्ने गर्छन् तर यसको पुष्टि नभएको कारण यसमा विश्वास नगर्नु नै उचित हुन्छ ।
आकस्मिक गर्भनिरोधक साधन
आकस्मिक गर्भनिरोधक साधन असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट गर्भ बस्न नदिन महिलाले प्रयोग गर्ने खाने चक्की हो । यस अन्तर्गत अनवान्टेड ७२, आइपिल, इ–७२ म्याक्स, इकोन, ओके, एमटीपी प्रिग्नो, एमटी पिल्स जस्ता विभिन्न प्रकारका चक्की पर्छन् ।
यसको सेवन असुरक्षित यौन सम्बन्धको ७२ घण्टाभित्र गरिसकिनु पर्ने भएकाले यसलाई ७२ घण्टे चक्की पनि भनिन्छ । आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीमा लिभोनोरजेस्ट्रेल वा युलिप्रिस्टल एसिटेट नामक एउटा हर्मोन हुन्छ, जसले गर्भ बस्नआवश्यक हर्मोनलाई नष्ट गरिदिन्छ र गर्भ बस्न दिँदैन । यो हर्मोनले पुरुष हर्मोन र महिला हर्मोनको बीचमा द्वन्द्व गरेर गर्भ बस्नदिँदैन, जसकारण अनिच्छामा गर्भ बस्न सक्दैन भन्ने मान्यता हो । यो हर्मोनले महिलाको डिम्बाशयबाट निस्कने डिम्बलाई रोक्ने, यदि डिम्ब निस्किसकेको छ भने शुक्रकीटसँग सेचन भई भ्रुण बन्न नदिने र यदि भ्रुणसमेत बनिसकेको छ भने पाठेघरमा टाँसिन दिँदैन । यस साधनको प्रयोगले शतप्रतिशत गर्भ रहन्न भन्ने चाहिं हुँदैन । यसको प्रयोग उचित तरिकाले गरे यसको प्रभाव राम्रै हुन्छ अन्यथा विभिन्न समस्या र बाँझोपन समेत हुन सक्छ । आकस्मिक घटनामा एक-दुईपटक प्रयोगगर्नाले यसले खासै फरक पार्दैन । यसको प्रयोगले वाकवाकीलाग्ने, बान्ता हुने, रिंगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, थकान महसुस हुने, स्तन भारी महसुस हुने भए पनि केहि समयमा आफैं हराएर जान्छ । धेरै पटक वा अव्यवस्थित प्रयोगले भने निम्न समस्याहरु आउन सक्छन् ।
छोटो अन्तरालमा अर्थात् धेरैपटक आकस्मिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग गरेमा महिनावारी गडबड हुन सक्छ  । त्यस्तै, कतिपयमा महिनावारीको समयमा धेरै रगत बग्ने, पेट दुख्ने र समयमा महिनावारी नहुने समस्या देखिन सक्छ । बिस्तारै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न नकारात्मक असर देखिन सक्छ ।
आकस्मिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग नियमित गर्ने महिलामा पछि गएर चाहेको वेलामा गर्भ नरहन सक्छ । कतिपयमा बाँझोपनको समस्यासमेत देखिन्छ ।
आकस्मिक गर्भनिरोधक साधन धेरै प्रयोग गरे हर्मोन असन्तुलित भइ मुड परिवर्तन भइरहने, तौल बढ्ने, टाउको दुखाइ वा माइग्रेनको समस्या हुनेजस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
कार्डियोभास्कुलर समस्या जस्तै, हृदयाघात, स्ट्रोक, रगत जम्नेलगायत दीर्घकालीन समस्या देखिन सक्छ ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार, आकस्मिक गर्भनिरोधक साधनले एस्ट्रोजोन हर्मोनमा गडबडी ल्याइदिन्छ, जसले गर्दा शरीरमा क्यान्सरका कोष वृद्धि हुने जोखिम बढ्छ । भविष्यमा स्तन क्यान्सर, ओभरियन क्यान्सरजस्ता जटिल समस्या देखिन सक्छन् ।
गर्भ रोक्नका लागि आकस्मिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग गर्नेले कन्डमको प्रयोग गर्दैनन्, जसकारण यौनरोगको जोखिम बढ्छ ।
आकस्मिक गर्भनिरोधक साधनको धेरै प्रयोगले पाठेघरको भित्ता (uterine lining) पातलो बनाइदिन्छ जसका कारण गर्भतुहिने (miscarriage) सम्भावना बढेर जान्छ ।
गर्भनिरोधक साधनको उचित प्रयोग गरे यसले इच्छा नगरिएको समयमा गर्भ बस्नबाट रोक्छ तर यदि तपाईं भविष्यमा सन्तान प्राप्ति गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने कुनै प्रकारको गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्दा चिकित्सकको सल्लाह अवश्य लिनुहोस् र आफ्नो शरीर र उदेश्य अनुकुल हुने साधन प्रयोग गर्नुहोस् ।
कतिपय अवस्थामा महिनावारीलाई सन्तुलित बनाउन पनि यस्ता साधनको प्रयोग गर्न चिकित्सकहरुले सल्लाह दिन्छन् । IVF गराउँदा पनि धेरै र गुणस्तरीय डिम्ब उत्पादन गराउन यस्ता साधन प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले यसबारे भ्रम राख्नु भन्दा चिकित्सकसँग परामर्श लिनु जरुरी हुन्छ । खासगरी आकस्मिक साधनको प्रयोगमा ।
धेरै चिन्ता र बढ्दो उमेरले प्रजनन् क्षमतामा प्रतिकुल असर पार्ने भएको कारण पनि यस्ता साधनको प्रयोग सुनियोजित हुनु जरुरी छ ।
कोरोनाको महामारीबाट गर्भवती महिला कति असुरक्षित?
गर्भावस्था एक जटिल अवस्था हो । यस बेलामा शिशुको विकासका लागि विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । झन् IVF गराएर गर्भ बसेको छ भने त दम्पतिहरु हरेक सा-साना...
IUI in Nepal - What you Need to Know
Intrauterine Insemination (IUI) isanon-surgical fertility procedure in which processed sperm is injected intoawoman’s uterus throughathi...
Top Fertility Doctors make IVF Miracle possible in Nepal
"Man is born free, but everywhere he is in chains." This quote by Jean-Jacques Rousseau has always provoked my thoughts and made meabeliever speci...
IVF Treatment in Nepal
Infertility is one of the major health problems worldwide, including Nepal. 1 out of 8 couples are affected by infertility problems worldwide. The e...
Finding the Best Fertility Clinic in Nepal
“The pure little souls give thousands of reasons to smile and keep going in life.” Many couples are not lucky enough to experience this pl...